WINDOWS 10 ANAGHỊ AHỤ ONYE NBIPUTE - WINDOWS - 2019
Ịmepụta nsogbu ahụ site n'igosipụta onye nbipute na Windows 10
Mgbe ị wụnye mmelite maka sistemụ arụmọrụ Windows 10, onye ọrụ ahụ nwere ike ịchọpụta na usoro ahụ adịghị ahụ onye nbipute. Ihe kpatara nsogbu a nwere ike ịbụ usoro ma ọ bụ ọkwọ ụgbọala.
Gbanwee nsogbu ahụ na igosipụta ngwa nbipute na Windows 10
Akpa, i ghaghi ijide n'aka na ihe kpatara nsogbu a abughi mmebi aru. Lelee ikwesị ntụkwasị obi nke ọdụ ụgbọelu USB.
Gbalịa ịgbanye ụdọ ahụ gaa n'ọdụ ọzọ na kọmputa gị.
Jide n'aka na ekwunyero eriri na ntinye na PC.
Ọ bụrụ na ihe niile dị n'usoro, o yikarịrị ka ọdịda emeela.
Ọ bụrụ na ị jikọọ ngwaọrụ maka oge mbụ, enwere ike ọ gaghị akwado ma ọ bụ na ọkwọ ụgbọala dị mkpa na-efu na usoro.
Hụkwa: Otu esi ejikọ kọmputa na kọmputa
Usoro 1: Chọta nsogbu
Ị nwere ike ịmegharị ọchụchọ maka nsogbu site na iji ọrụ ịntanetị. O nwekwara ike gbalịa idozi nsogbu ahụ na-akpaghị aka.
Right pịa na akara ngosi ahụ "Malite" ma họrọ "Ogwe njikwa".
Gbanwee ikiri nke akara ngosi buru ibu wee chọta ngalaba "Nchọpụta nsogbu".
Na ngalaba "Akụrụngwa na ụda" họrọ "Iji onye nbipute".
Na windo ohuru ohuru "Na-esote".
Chere maka Doppler iji mezue.
Enwere ike ịnye gị ndepụta nke ị ga-achọ ịhọrọ ngwaọrụ enweghị ike ma ọ bụ gosi na ọ dịghị edepụtara ya ma ọlị.
Mgbe ịchọrọ maka njehie, ọrụ ahụ ga-enye gị akụkọ na ngwọta maka nsogbu ahụ.
Ngwunye ihe nyocha na-enyere aka dozie nsogbu ndị isi na ụfọdụ ọdịda.
Usoro 2: Tinye ihe nbipute
Ị nwere ike ime nke ọzọ ma gbalịa ịgbakwunye onye nbipute n'onwe gị. Ọ na-abụkarị usoro ahụ na-eburu ihe ndị dị mkpa maka ngwaọrụ site na saịtị ahụ.
Mepee menu "Malite" ma họrọ "Nhọrọ".
Ugbu a gawa "Ngwaọrụ".
Na ngalaba nke mbụ, pịa na "Tinye ihe nbipute ma ọ bụ nyocha".
Ikekwe usoro ahụ ga-achọta ngwaọrụ n'onwe ya. Ọ bụrụ na nke a emeghị, pịa ihe ahụ. "Mbipụta chọrọ ...".
Tinye akọrọ "Họrọ otu onye na-ebipute ya site na aha" ma ọ bụ nhọrọ nke ga-adịrị gị mma.
Tinye aha ngwaọrụ wee pịa "Na-esote".
Ọ bụrụ na onye nbipute ahụ adịghị ejikọta mgbe ịmechara ndị a, gbalịa iji aka gị wụnye ndị ọkwọ ụgbọala. Naanị gaa na ebe nrụọrụ weebụ na-emeputa na mpaghara kwesịrị ekwesị, chọta ndị ọkwọ ụgbọala maka ụdị nbipụta gị. Ibudata ma wụnye ha.
Njikọ iji kwado ibe maka ndị na-ewu akwụkwọ nsị:
Ọ bụrụ na nhọrọ ndị edepụtara adịghị edozi nsogbu ahụ na ngosipụta nke nbipute ahụ na Windows 10, ị ga-akpọtụrụ onye ọkachamara. Ngwaọrụ a nwere ike ịbụ nke anụ ahụ, enweghị ike, ma ọ bụ akwadoghị ya site na sistemụ arụmọrụ a.